विश्व हल्लाउने २०७४ का १० महत्वपूर्ण घटना | Ratopati
विश्व हल्लाउने २०७४ का १० महत्वपूर्ण घटना
personश्रवण उप्रेती exploreकाठमाडौं access_timeबैशाख २, २०७५ chat_bubble_outline0
श्रवण उप्रेती / राताेपाटी
काठमाडौँ । २०७४ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा घटना प्रधान रह्यो । यो वर्ष केही यस्ता घटे जसको प्रभाव यो वर्षका साथै भविष्यमा पनि रहने देखिन्छ । यहाँ त्यस्तै महत्वपूर्ण दश घटनाहरु प्रस्तुत छन् ।
१.अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी नीति
राष्ट्रपति चुनावको क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले आफू निवार्चित भए ‘अमेरिका पहिलो’ नीति लिने बताएका थिए । सो क्रममा उनले अमेरिका बेफाइदामा रहेको सबै मुद्दामा फेरबदल गर्ने बाचा गरेको थिए । कतिले यसलाई भोट तान्ने रणनीति मात्र भएको भनेका थिए तर ट्रम्प आफ्नो बचनको पक्का निस्किए ।
शासनमा आउना साथ अघिल्लो वर्ष ‘ट्रान्स प्यासेफिक पार्टनरसीप’बाट हात झिकेका उनले यो वर्ष पनि अमेरिकालाई आर्थिक भार परेका कयैन सस्था र सम्झौताबाट अलग भए ।
जुन १८ मा डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट हात झिके । मानव क्रियाकलापले वातावरणमा पारिरहेको प्रभावलाई घटाउने उत्कृष्ट विकल्प मानिएको यो सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएपछि लक्ष्य नभेटिने हो कि भन्ने डर बढेको छ ।
यसका साथै डोनाल्ड ट्रम्पले सयुक्त राष्ट्रको युनेस्को बाट अमेरिकालाई निकालेका छन् । सो संस्थाले पाइलेस्टाइनलाई सदस्यता दिएको विरोधमा यस्तो कदम चालिएको हो ।
वर्षको अन्त्यतिर अमेरिकाले आफैले पक्षपोषण गर्ने गरेको खुल्ला व्यापार नीतिको उल्लङ्घन गर्दै चीनबाट अमेरिका आउने सामाग्रीहरुमा व्यापक कर वृद्धी गरे । ट्रम्पका अनुसार चीनसँग अमेरिकाको ठूलो व्यापार घाटा समाधानको लागि यसो गरिएको हो । अमेरिकाको कदमको बदलामा चीनले पनि आफ्नो देशमा आयात हुने अमेरिकी सामाग्रीहरु माथि कर बढायो । विश्वका शीर्ष दुई शक्ति राष्ट्रबीच भइरहेको यी कदमले विश्वव्यापी व्यापारयुद्ध हुने देखिएको छ ।
२. उत्तर कोरियाली तनाव र वार्ताको माहोल
डोनाल्ड ट्रम्पको उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उनबीच भएको वाक युद्धले पनि वर्ष समाचारमा छाइरह्यो । यी दुई शत्रुबीच बढेको तनाबले शितयुद्ध कालिन समयको सम्झना गरायो ।
उत्तर कोरियाले यो वर्ष आफ्नो आणविक मिसाइल प्राप्तिको लक्ष्यतर्फ थप सफलता हासिल ग¥यो । उसले संसारको जुनै ठाँउमा प्रहार गर्न मिल्ने अन्तरमहादेशिय ब्यालेष्टिक मिसाइल(आइसीबीएम)मा जोड्न मिल्ने आकारको आणविक बम निर्माणमा सफलता प्राप्त गरेको छ । आइसीबीएम हात पार्न नसके पनि उत्तर कोरियाले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियासम्म मार हान्न सक्ने मिसाइलको सफल परिक्षण गरेको छ । यसले पश्चिममा कोरियाली प्रायद्वीपको संकट उच्च प्राथमिकतामा परेको छ ।
तर, वर्षको अन्त्यतिर भने कोरियाली प्रायद्विपमा शान्ति केही आशा देखियो । दक्षिण कोरियामा भएको शित ओलम्पिकमा उत्तर कोरियाको सहभागीताले बढाएको न्यानोपन अघि बढेर लामो समय रोकिएको दुई कोरियाका शिर्ष नेताको वार्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ । दुई कोरियाली समकक्षीको भेट वार्ता पछि उत्तर कोरियाली नेताले ट्रम्पसँग पनि वार्ता हुनै समयतालिका बनेको छ । आगामी दिन यो वार्ताको सफलता र असफलता जुनै हिसाबले पनि कोरियाली संंकटको विकासक्रममा विश्वको ध्यान हुनेछ ।
३. क्याटोलोनियाको जनमतसंग्रह
यो वर्ष विश्वका दुई क्षेत्रले आफू रहिरहेको राज्यबाट अलग हुन जनमत संग्रह गरे । सय वर्ष देखि आफ्नो अलग राष्ट्र बनाउन संघर्ष गरिरहेका कुर्दहरुले इराकमा रहेको स्वशासित कुर्द क्षेत्रलाई अलग बनाउन जनमत संग्रह गराएका थियो । उता स्पेनबाट स्वतन्त्र हुन १ अक्टोबरमा क्याटोलोनियाले जनमत संग्रह गराए । दुवै निर्वाचनमा अलग हुने पक्षमा अत्यधिक मत आयो । तर, मत परिणाम पछि केन्द्र सरकारले लिएका कढा कदमले दुवै क्षेत्रको स्वतन्त्रताको लक्ष्य अन्यौल र टाढा भएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।
यी दुई मध्य युरोपमा रहेकाले क्याटोलोनियाको जनमतसंग्रहले विशेष चर्चा पायो । क्याटोलिनामा जनमत संग्रह भएको दिन नै केन्द्र सरकारले मतदातालाई रोक्नको लागि प्रहरी परिचालन गरेको थियो । ठाँउ ठाँउमा हिंसा भयो । तर पनि यसले मतदाताहरुलाई मत हाल्नबाट रोक्न सकेन । कुल खसेको मतमा ९०% अलग हुने पक्षमा देखिए । क्याटोलोनिया स्वशासित संसदले जनमत सङ्ग्रहको मत परिणामलाई २७ अक्टोबरमा सदर गर्दै स्वतन्त्रता घोषणा ग¥यो । तर लगतै म्याड्रिड स्थीत केन्द्र सरकारले त्यहाँको क्षेत्रिय सरकारलाई नै भंग गरिदियो । संविधान विरोधी काम गरेको भन्दै देशद्रोहको आरोप पृथकतावादी नेताहरुलाई जेल हालिएको छ ।
२१ डिसेम्बरमा क्याटोलोनियामा भएको निर्वाचनमा कुनै एक पार्टीको बहुमत नआए पनि क्याटोलोनिया देशको पक्षमा रहेका पार्टीहरुको कुल मत जोड्दा बहुमत आएको छ । यसले त्यहाँ गतिरोधले जहाँबाट शुरु भएको थियो त्यहीँ आइपुगेको छ ।
स्पेन आफ्नो सबैभन्दा सम्पन्न मध्य एक क्षेत्र गुमाउन चाहँदैन । देशको जम्मा ६ प्रतिशत भूभाग मात्र ओगट्ने यो क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान गर्छ । उता, आफ्नो फरक पहिचान, लामो समय केन्द्रबाट भोगेको विभेद र पछिल्लो समय आफूले योगदान गरेभन्दा कम प्रतिफल पाउने कारण देखाउँदै अलग राष्ट्रको पक्षधरहरु स्पेनसँग रहन नसकिने बताउदै आएका छन् । आउने वर्ष स्वतन्त्रता पक्षधर र केन्द्रबीच तनाब घट्ने भन्दा बढ्ने देखिन्छ ।
साथै यसको सफलता र असफलताले सयुक्त अधिराज्यबाट अलग हुन खोजिरहेको स्कटल्याण्ड, क्यानडाबाट अलग हुन खोजिरहेको क्युवेकआदी क्षेत्रको पृथकताबादी आन्दोलनलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
४.अमेरिकामा ठूला बन्दुक आक्रमण र विद्यार्थीको विरोध ¥याली
अमेरिकामा ठूलो सङ्ख्यामा साना तिना बन्दुक आक्रमण भइरहेका हुन्छन् । एक तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा मात्र बन्दुक सम्बन्धी हमलामा ११ हजार अमेरीकीको ज्यान गएको थियो ।
कहिले काँही भने कयैन मानिसहरुको एकै पटक हुने खालको बन्दुक हमला हुने गर्छ । यो वर्ष भएका यस्ता घटनामा दुई घटना विशेष रह्यो ।
२०१७ अक्टोबर १ मा एक बन्दुकधारीले लास भेगसको एक होटलको ३२औं तल्लाबाट तल भइरहेको सांगितिक कार्यक्रममा उपस्थित भिडमाथि गोलि बर्साउन थाले । यस गोलीकाण्डमा ५८ जनाको ज्यान गयो भने ५०० जनाभन्दा बढी घाइते भए । यति हताहती पछि आक्रमणकारीले आफैलाई गोली हानेर आत्महत्या ग¥यो ।
बन्दुक आक्रमणको खास कारण थाहा नपाइएको यो आक्रमण अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक बन्दुक आक्रमणको थियो ।
त्यसपछि २०१८ फेब्रुअरी १४ मा फ्लोरिडाको पार्कल्याण्डको एक स्कुलमा भएको बन्दुक आक्रमणमा १७ जना मारिए । यो घटनापछि देश व्यापी रुपमा विद्यार्थीहरु ‘अति भयो’ भन्ने भावका साथ एक्यवद्धता जनाए । र ¥यालीको लागि आह्वान भयो । अमेरिकामा धेरै मारिने बन्दुक आक्रमण स्कुल क्षेत्रमा हुने गरेको छ ।
अमेरिकाको संविधानको दोश्रो संसोधनको हवाला दिदै निक्कै शक्तिशाली लेवि संगठन एन.आर.ए.ले बन्दुक राख्न पाउने अधिकारको बचाउ गर्दै आएको छ । यही कारण त्यहाँ अत्यन्त सहजताका साथ बन्दुक किन्न पाइन्छ । र अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रणका लागि गरिने कानुनी प्रयासलाई उसले सांसदहरुलाई प्रभावमा पारेर रोक्ने गरेको छ ।
यो अवस्थाको विरोध गर्दै पार्कल्याण्ड गोलीकाण्डमा बाचेकाहरुले २४ मार्चमा अमेरिकाको राजधानीमा विशाल प्रदर्शन गरे । दश लाख हाराहारीमा उपस्थीत ¥यालीलाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताहरुले एन.आर.ए.प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
यसले तत्काल केही परिवर्तन गर्ने देखिँदैन । तर, एक हिसाबले एन.आर.ए.को विरोधमा भएको जस्तो देखिने यस्तो खालको पहिलो ¥याली भएकाले यसले त्यहाँको बन्दुक राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ । नयाँ वर्षको मध्य तिर अमेरिकामा संसदको लागि मध्यवर्ती चुनाव हुँदैछ । त्यसमा समेत यो ¥यालीले असर पार्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
जनस्तरमा समर्थन नपाइने डरले अढान लिन अन्कनाइरहेका बन्दुक नियन्त्रण समर्थक सांसदहरुलाई यसले नैतिक बल दिएको छ । बर्सेनी कुनै गृहयुद्धमा फसेको देशको जति बन्दुकसम्बन्धी मृत्युबाट मरिरहेको अवस्थाबाट वाक्क भावी मतदाता रहेका किशोर किशोरीको ठूलो सङ्ख्यामा बन्दुक विरोधी भावनाले भावि राजनीतिलाई असर पार्ने नै छ ।
५.सिरियाको पूर्वी गुटाका विद्रोहीमाथि आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया
माघ महिनामा सिरियाको पूर्वी गुटामा सिरियाली सरकारले हवाई आक्रमण शुरु गरे पछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तान्यो । पूर्वी गुटा राजधानी दमसकस जोडिएको मध्य एक मात्र विद्रोही कब्जाको कब्जामा रहेको क्षेत्र हो । सन् २०१३ देखि विद्रोहीको कब्जामा रहेको यो क्षेत्र कब्जा गरेर सिरिया सरकार ७ वर्ष देखि चलिरहेको यो गृहयुद्धमा आफ्नो स्थीति बलियो भएको देखाउन खोजिरहेको छ । २०१५ सेप्टेम्बर ३० देखि सिरिया सरकारलाई विद्रोहीविरुद्ध लड्न रसियाले सेना पठाएरै सहयोग गरिरहेको छ । यसले गृहयुद्धको शक्ति सन्तुलनमा सरकार माथि पर्न थालेको हो ।
पूर्वी गुट्टा कब्जा गर्ने संघर्षमा कयैन बालबालिक मरेका , घाइते भएको भिडियो विद्रोही समर्थक ‘ह्वाइट हेल्मेट’ले सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्न थाल्यो । यी भिडियोहरुले विश्वव्यापी रुपमा सिरिया सरकारको कदमको आलोचना हुन थाल्यो ।
वर्षको अन्त्यतिर सिरियाली सरकारले त्यो क्षेत्रमा बाँकी रहेका ठानिएका अन्तिम विद्रोहीहरुलाई हटाउनको लागि विशालु रसायनहरुले आक्रमण ग¥यो । यस कदमको अमेरिका र यसका मित्र राष्ट्रहरुले कढा आलोचन गरे । सिरियाली सरकार र उसको मित्र शक्ति रसियाले यसलाई ‘ह्वाइट हेल्मेट’ले फैलाएको झुटो समाचार प्रतिक्रिया दियो । उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन टोली अनुगमन गर्न माग गरे । एक अन्तराष्ट्रिय टोली सिरियामा पुगेको २०७४को अन्तिम दिन अमेरिका र उसका मित्र राष्ट्रहरुले सिरियामाथि मिसाइल हाने । यसले सिरियाली गृहयुद्ध चाडै अबतरण हुने देखिदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण समकालिन समयको सबैभन्दा विध्वङ्शक युद्धमा बदलिएको युद्धमा ५ लाख बढीले ज्यान गुमाइसके । साथै ज्यान जोगाउनका लागि ५६ लाखले देश छोडेका छन् भने ६१ लाख नागरिकहरु आन्तरिक रुपमा विस्थापित भएका छन् ।
६.साउदी अरबमा मोहम्मद विन सलमानको उदय र भूराजनैतिक प्रभाव
जुनमा आफ्ना पिता राजा सलमानबाट ३२ बर्षे मोहम्मद विन सलमान उत्तराधिकारी घोषित भए । उनलाई युवराज बनाउनको लागि त्यो समय युवराज रहेका मोहम्मद विन नायफलाई बर्खात गरिएको थियो । युवराज भएसँगै मोहम्मद काम लाग्न थालिहाले ।
अधिकार सम्पन्न भए पछि मोहम्मदको पहिलो काम तेलमा आश्रित आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३० सम्म पुनगर्ठन गर्ने ‘भिजन २०३०’ योजना अघि सारे । त्यो समयसम्म उनी साउदी अर्थतन्त्रलाई विभिदता पूर्ण बनाउन चाहन्छन् ।
अर्थतन्त्रको अतिरिक्त उनले समाजिक क्षेत्रको सुधारमा पनि हात हालेका छन् । उनले साउदी अरबका महिलाहरुप्रति रहेको कडा बन्देजहरु केही खुकुलो बनाएका छन् । यस कार्यले पश्चिममा प्रशंसा पायो ।
यसका अतिरिक्त मोहम्मदले केही खतराको संकेत पनि दिए । उनले आफ्नो राजा बन्ने लाइन पक्का गर्न आफ्ना भाईभतिजाहरुलाई नियन्त्रण गर्न थालेका छन् । नोभेम्बरमा उनले आफ्ना एघार भाइहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा थुने । भ्रष्टाचारको पर्दा उनले सत्तासंघर्ष ठेगान लगाउन खोजेको भन्नि ।
मोहम्मदको उदयको भूराजनैतिक प्रभाव समेत देखिन थालिसक्यो । उनी इरान र मध्यपूर्वमा इरानप्रति निक्कै कडा रुपले प्रस्तुत भइरहेका छन् । उनी गृह मन्त्री रहदानै उनले सन् २०१५ मा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीको कब्जा गरेको दक्षिणी छिमेकी यमनमा आक्रमण थालेका थिए । हाल युवराज भएपछि इरानसँग नरम रहेको अरब राष्ट्र कतारमा नाकाबन्दी लगाए ।
यसका साथै उनी विश्व शक्ति राष्ट्रहरुले इरानसँग गरेको आणविक सम्झौता कुनै हिसाबमा पनि भंग गर्नु पक्षमा लबिङ्ग गरिरहेका छन् । सम्झौताको मुख्य थिम इरानले पाँच वर्षसम्म आणविक हतियार निर्माण रोकेको बदला इरानमाथिको अन्तराष्ट्रिय नाकाबन्दी हटाउने भन्ने छ । मोहम्मद नाकाबन्दी हटेपछि बढेको ब्यापारले इरान बलियो हुने डरमा छन् ।
उनी इरानसँगको सम्झौता रद्ध नभए साउदी अरब आफैले आणविक अस्त्र निर्माण गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
यसका साथै मोहम्मदले इरानको समर्थन रहेको सिरियाली राष्ट्रपति बसार अल–असादको शासन हटाउन विद्रोहीहरुलाई सम्पूर्ण सहयोग गरिरहेको रिपोर्टहरु आइरहेको छ ।
मोहम्मदको उदयले लामो सयम देखि कुनै न कुनै द्वन्दमा रहेको मध्यपूर्वका मुख्य क्षेत्रिय राष्ट्रहरु इरान र साउदी अरबबीचमा नै युद्धको खतरा बढाएको छ ।
रोहिङ्ग्याहरु म्यानमारको रखाइन् क्षत्रका बासिन्दा हुन् । ९०% बौद्ध रहेको म्यानमारमा बसोबास गर्ने रोहिङ्ग्याहरु अधिकाशं मुसलमान धर्मावलम्बी हुन् भने थोरै सङ्ख्यामा हिन्दु पनि छन् । रोहिङ्ग्याहरु वर्षौँदेखि विभेद झेलिरहेका छन् । विभेद अन्त्य गर्ने तर्फ कदम चाल्न भने म्यानमार सरकारले सधैं बेवास्ता गरिरह्यो । म्यानमारको संस्थापनले रोहिङ्ग्याहरुलाई नागरिकनै मान्दैन ।
रोहिङ्ग्या समूदायमाथिको सबैभन्दा खराबमध्येको एक हमला यो वर्ष अगस्टमा म्यानमार सेनाबाटै भयो । योजनाबद्ध बलात्कार, आम संहार र यातनाबाट बच्नका लागि रोहिङ्ग्याहरु छिमेकी देश बङ्लादेश भागे । पछिल्लो गणना अनुसार चार लाख रोहिङ्ग्याहरु बङ्लादेश विस्थापित भएका छन् । थप हजारौं आन्तरिक रुपमै विस्थापित छन् ।
म्यानमारको सेनाले भने आफूले कुनै पनि मानवअधिकारको हननको काम नगरेको बतायो । उसका अनुसार उसले रोहिङ्ग्या विद्रोहीले प्रहरी क्याम्पमा गरेको आक्रमणको प्रतिरक्षा मात्र गरेको थियो । तर घटनाको विश्लेषणले अर्कै यथार्थ भन्छ ।
यो घटनाले सैनिक सरकारविरुद्ध लामो लडाई लडेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रशसा पाएकी आङ्ग सान सुकीलाई आलोचनको केन्द्रमा पारिदियो । यो संकटमा उनले अङ्गालेकी मौनता अन्तराष्ट्रिय जगत अचम्मीत भएको छ ।
८. युरोपमा ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिक लहर
तीन कार्यकाल जर्मनीमा शासन गरिसकेकी एन्जेला मर्केलले चौथो कार्यकालको लागि सेप्टेम्बरमा भएको निवार्चनमा सबैभन्दा कम मत पाइन् । यस्तो हालत दोश्रो ठूलो पार्टी समाजवादीहरुको थियो । अति दक्षिणपन्थी पार्टी एएफडी अप्रत्याशित रुपमा तेस्रो ठूलो पार्टी रुपमा उदायो । दोश्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक जर्मनीमा अति दक्षिणपन्थी पार्टी संसदमा गएको हो । केही वर्ष अघि मात्र स्थापना भएको यो पार्टीले लिएको उग्र आप्रबासी विरोधी नितीले मतदाताहरु आकर्षित गरेको देखियो ।
यो अवस्था जर्मनीको मात्र होइन युरोपका कयैन देशमा देखियो । ठूलो संङ्ख्यामा शरणार्थीको आगमनले निम्त्याएको असहजता, आर्थिक संकट र राजनैतिक विभाजनका कारण मतदाताहरुमा स्थापित पार्टीप्रति विश्वास कम भएको देखिन्छ ।
नेदरल्याण्ड, फ्रान्स, अस्ट्रिया, पोल्याण्ड, हङ्गेरी र अन्य प्रमुख राष्ट्रहरुमा युरोपेली संघ विरोधी , आप्रबासी विराधी पपुलिष्ट पार्टीहरुको उदय भयो । राजनैतिक रुपमा सचेत भनिएको फ्रान्समा समेत स्थापित दुवै पार्टी निक्कै पछि आए । त्यहाँ झण्डै नव नाजी पार्टी नेसनल फ्रन्टकी उमेद्वार मरिया ल फेनले जितेकी थिइन । उनको चुनवाको प्रमुख नारा पनि आप्रबासी आगमन नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो ।
फ्रान्समा मध्यपन्थी इमानुएल माक्रोले उनलाई पराजित गरे पछि यो लहर केही मत्थर भएको देखिन्छ । तर युरोपको हावा एशिया र अमेरिका तिर फैलेको देखिन्छ ।
९. चीनमा सी जिनपिङ्ग झनै शक्तिशाली र विश्वमा चीनको प्रभाव
वर्षको अन्त्यतिर चीनको जनकङ्गेसको पाँच वर्षमा बस्ने बैठक बस्यो । यसले चीनको राष्ट्रपतिको शासनमा रहेको दुई कार्यकालको संबैधानिक सीमा हटाएको खबरका कारणले विशेष चर्चा पायो । यो परिवर्तन वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको लागि ल्याइएको मानिन्छ ।
अघिल्लो वर्ष ‘प्यारामाउण्ट लिडर’ घोषणा गरिए पनि नै उनलाई शक्तिको हिसाबमा माओ त्से तुङ्गपछि सबैभन्दा शक्तिशाली नेता मानिन थालिएको थियो । अब कार्यकालको सीमा हटेसँगै उनले जीवनकाल भर शासन गर्ने हुन कि भन्ने शंका गरिन थालेको छ ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरेर आफ्ना अधिकाशं राजनैतिक प्रतिस्पर्धीहरुलाई ठेगान लगाएका सीले कार्यकाल सीमा हटाएर थप शक्ति सञ्चय गरेको मानिएको छ ।
‘बलियो चीन’ सीको नारा रहेको छ । विश्वमञ्चहरुमा उनले चीनको हैसियत अनुसारको जिम्मेबारी पाउनुपर्ने बताउन थालेका छन् । सीको राष्ट्रपति शासनमा चीनले पहिले देखि अङ्गालेको अहस्तक्षेपको परराष्ट्र नीति त्यागेको छ ।
सीले अघिल्लो वर्ष देखि शुरु गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिशियटिभलाई उनको विश्वमा चीनको प्रभाव फैलाउने प्रयासको रुपमा हेरिएको छ । यो वर्ष यसका प्रभाव देखिन थालेका छन् ।
अफ्रिकामा विदेशी राष्ट्र मध्य चीनको बलियो उपस्थीति रहेको छ । विकास आयोजना र खानी उदखनन्मा अफ्रिकामा आफ्नो बलियो पकड कायम गरेको अवस्थाले पश्चिमाहरुले नयाँ खालको उपनिवेशवाद भन्न थालेका छन् ।
चीनले यो वर्ष दक्षिण अमेरिकामा समेत आफ्नो लगानीमा बृद्धी गरेको छ ।
यहाँ सम्म चीनको प्रभाव अष्ट्रेलिया जस्तो सम्पन्न राष्ट्रमा पनि पर्न थालेको खबरले अष्ट्रेलियाको राजनिती हालसम्म तरङ्गित छ । चीनको अष्टे«लियामा परेको भनिएको प्रभाव कम गर्नका त्यहाँको सरकारले विशेष कदम नै अघि सारेको छ ।
यसका अतिरिक्त २०७४ मा साउथ चाइन सी समुन्द्र क्षेत्र र दक्षिण एशियामा चीनले आफ्ना उपस्थिती बढायो । चीनको बढ्दो आर्थिक र प्राविधिक क्षमताले यो क्रम रोकिने भन्दा बढ्ने देखिन्छ ।
१०. रोवर्ट मुगावे सत्ताच्युत
के कुनै व्यक्ति एकै पटक नायक र खलनायक हुन सक्छ ? रोवर्ट मुगावेको जीवन हेर्दा यसको उत्तर सकारात्मक आउछ । नेल्शन मण्डेलाजस्तै मुगावले आफ्नो देशमा कायम अल्पसङ्ख्यक गोराहरुको विभेदकारी शासनको विरोध गर्दा जेल भोग्नु परेको थियो । उनले चलाएको आन्दोलनले अन्तत देशमा गोराहरुको शासन अन्त्य ग¥यो । तर मण्डेलाजस्तो मुगावेले लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएनन् । उनले जिम्बाबेमा लगातार ३७ वर्ष शासन गरे । ९३ वर्ष भइसकेका मुगाबे अझै शासन गर्ने मुडमा देखिन्थे । तर उनको चाहनामा नोभेम्बरमा सेनाको हस्तक्षेपले पूर्ण विराम लाग्यो ।
उनको पतनको शुरुवात उप–राष्ट्रपति रहेका इमरसन नान्गेग्वालाई हटाएर आफ्नी श्रीमती ग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाएबाट शुरु भएको थियो । मुगाबेभन्दा ४१ वर्ष कम उमेरकी ग्रेस जिम्बाबेमा अलोकप्रिया थिइन । २००८ मा देशमा आर्थिक संकट चलिरहदा ग्रेसले पश्चिमी राष्ट्रमा करोडौको सपिङ्ग गरेको समाचारले उनलाई बदनाम बनाएको थियो । यो कदम पछि उनले आफ्नो पार्टी ‘जानु पी एफ’मा विश्वास गुमाएका थिए । त्यही अबसरमा त्यहाँको पार्टीसँग निष्ठावान सेनाले मुगाबेलाई पद छाड्न दवाव दिने हिसाबले नोभेम्बर १५ मा नजरबन्दमा लियो । नजरबन्दमा राखिएको केही पछि उनले राजिनामा गरे । उनको बहिरगमनमा जिम्बाबेमा उत्सब निकालिएको थियो ।
हाल जिम्बावेमा मुगाबेले उपराष्ट्रपतिबाट हटाएका एमरशन राष्ट्रपतिमा चुनिएका छन् । त्यहाँ अर्को वर्ष चुनाव घोषण गरिएको छ ।
मुगाबेको बहिरगमनले अफ्रिकाको कयैन देशमा लामो समयदेखि शासन गरिरहेका अरु शासकमाथि पनि दवाव हुने देखिएको छ ।
आन्तरिक हवाई सेवा सुरु : ८ कम्पनीलाई ५० वटा उडानको अनुमति
वामदेवको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
किसान मजदुरका सर्वहारा नेता सहिद सूर्यनाथ रान
संक्रमित आयुर्वेद औषधी सेवन गर्नबाट वञ्चित भएः नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ